शक्तिलाई अब लप्पन छप्पन २ नै कुर्नुपर्ने हो ? « Mazzako Online
शक्तिलाई अब लप्पन छप्पन २ नै कुर्नुपर्ने हो ?
डेब्यू फिल्म चलेन भने वर्वाद हुन्छ । किनभने, डेब्यू फिल्म कलाकारको करिअरसँग जोडिएको कुरा भयो । अभिनेता शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठको डेब्यू फिल्म डुब्यो । उनका पिता शिवले हतारमा फिल्म रिलिज गरे । फिल्मको काम नै नसकी उनले फिल्म रिलिज गरे र जोखिम मोलेको बताए ।
तर, उनको छोराका लागि भने उनले धैर्य गर्न सकेनन् । शक्तिको फिल्म एउटा यस्तो प्रेम कहानी चल्यो । तर, दर्शक आएनन् । कोभिड पछि रिलिज भएको पहिलो नयाँ फिल्ममा दर्शकको उपस्थिती भएन । यसले तनाव । शिवका छोरा शक्तिको डेब्यू फ्लप भएपनि फिल्मीकर्मीले भने उनको कामलाई मन पराएका छन् ।
यसैले उनको संभावना कमजोर भैहाल्यो भन्न मिल्दैन । शक्तिले अभिनय गरेको फिल्म लप्पन छप्पन २ फागुणको अन्तिम साता रिलिज हुँदैछ । यो फिल्मबाट उनले आशा जगाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, छोराको डेब्यू फिल्ममै शिवले यति धेरै हेलचक्राई किन गरेका होलान् ?